Saynis - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay dhammaystiraan 3.0 buundooyinka sayniska. Dhammaan ardayda waxaa looga baahan yahay inay dhammaystiraan 1 dhibic ee Sayniska Jirka iyo 1 amaah ee Bayoolaji. Intaas waxaa sii dheer, Waaxda Waxbarashada ee Minnesota waxay uga baahan tahay dhammaan ardayda inay dhammaystiraan hal sano oo ah Kimistariga ama Fiisigiska.
Inta badan ardayda MHS waxay qaataan afar sano oo saynis ah taxanaha soo socda: Sayniska Jirka (9aad), Kimistariga (10aad), Fiisigiska (11aad ama 12aad), iyo Bayoolaji (11aad ama 12aad). Fikradaha casriga ee cilmiga bayoolajiga waxay si aad ah ugu tiirsan yihiin fikradaha kiimikada; haddaba, kiimikada ayaa shardi u ah dhammaan koorsooyinka cilmiga nafleyda.
Koorsooyinka Sayniska (PDF)
Koorso: # 3026
Koorsadani waxay dhammaystireysaa .5 oo ah buundada Sayniska.
Fasalkan, waxaad ku baran doontaa xiddigaha, sida loo isticmaalo telescope-ka oo ay weheliyaan sayniska iyo taariikhda xiddigiska.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan cilmiga xiddigiska
Koorso: # 3012, S1
Koorso: # 3014, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: C ama ka fiican sayniska jirka ama sayniska maaddada sharafta
Chemistry waa fasal udiyaarin kuliyadeed oo ardayda baraya mabaadi'da kimistariga aasaasiga ah iyo codsiyada dhabta ah ee dunida ee kimistariga bulshada dhexdeeda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kimistariga
Koorso: # 3016, S1
Koorso: # 3018, S2
Shuruudaha: A ama B ee Maamuusta Sayniska Jirka; A guud ahaan Sayniska Jirka ama Fiisigiska 1. Isla mar ahaantaana loo diiwaangaliyo Algebra Sare ama wixii ka dambeeya.
Koorsadani waxaa loogu talagalay ardayda doonaya qaab qoto dheer oo adag oo loogu talagalay barashada kiimikada, iyo ku xirnaanshaha dunida dhabta ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Darajooyinka Kiimikada
Nidaamyada Dhulka iyo Hawada
Koorso: # 3024
Koorso hal-semester ah oo loogu talagalay in lagu baaro laguna falanqeeyo nidaamyada dhulka iyo booska.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Nidaamka Dhulka iyo Hawada
Habdhiska Bini-aadamka iyo Jirka. 2
Koorsada # 3022
Heerarka : .5 (koorso hal-semester ah)
Shuruudaha looga baahan yahay : Anatomy iyo Physiology 1 ama VANTAGE Caafimaadka Sayniska Dadweynaha, Sayniska Jirka, iyo Kimistariga
Koorsadani waxaa loogu talagalay ardayda xiisaha u leh sida jidhka bini'aadamka u shaqeeyo iyo beeraha la xiriira daryeelka caafimaadka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan habdhiska jirka iyo jir ahaanshaha 2
Sayniska Jirka isku dhafan
Koorso: # 3000, S1
Koorso: # 3002, S2
Koorsadan loo baahan yahay waxaa ku jira cutubyo cabirro ah, kiimiko hordhac ah iyo fiisigis hordhac ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Sayniska Jirka ee Isku-dhafan
Maaddooyinka Sayniska Jirka ee Isku-dhafan
Koorso: # 3004, S1
Koorso: # 3006, S2
Shuruudaha: A ama B ee fasalka 8aad Algebra, A ama B fasalka 8aad Sayniska Dhulka
Koorsadani waxay hordhac u tahay aagagga kiimikada iyo fiisigiska.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maaddooyinka Sayniska Jirka ee Isku-dhafan
Fiisigiska Dayactirka Guryaha
Koorso: # M3036, S1
Koorso: # M3038, S2
Heerarka: 2.0 (koorso sannad-dheer ah, laba saacadood)
Ardayda waxaa loo diiwaangelin doonaa labada Dib-u-hagaajinta Guriga (koorsada waxbarashada tikniyoolajiyadda) iyo Fiisikiska la adeegsaday (koorsada sayniska) oo qayb ka ah Fiisigiska Dayactirka Guriga. Buuxiya shuruudaha sayniska Fiisigiska.
Koorsadani wali looma oggolaan ujeeddooyinka U-Qalmitaanka Bilowga ah ee NCAA.
Koorsada Gacan-ku-haynta ee loogu talagalay inay bixiso aragti fikradeed oo shaqeyneysa ee Warshadaha Ganacsi. Fikradaha Casriga ah / Fikradaha Dayactirka Guriga waxaa lagu baran doonaa iyadoo lagu darayo mabaadi'da muhiimka ah ee fiisigiska iyadoo loo marayo muraayadaha naqshada iyadoo diiradda la saarayo qiimeynta ku saleysan mashruuca.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Fiisigiska dayactirka guriga
Koorso: # 3040, S1
Koorso: # 3042, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: Sayniska Jirka, Kimistariga si adag ayaa lagula taliyaa
Mabaadi'da Bayoolaji waxay baareysaa xiriirka bini-aadamka sida nafley ahaan deegaanka iyo bey'ada iyo qaar ka mid ah nidaamyada gudaha ee aadanaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan mabaadi'da bayoolajiga
Koorso: # 3008, S1
Koorso: # 3010, S2
Heerarka: .5 (sanadkiiba
Shuruudaha looga baahan yahay: Si guul leh ugu dhammaaday Sayniska Jirka G ama Maamuus
Koorsadan waxaa loogu talagalay ardayda inay bartaan mabaadi'da aasaasiga ah iyo codsiyada dhabta ah ee kimistariga ee fasalka udiyaar garowga kulleejada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Mabaadi'da Kiimikada
Koorso: # 3032, S1
Koorso: # 3034, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: Sayniska Jirka, Quudratic Algebra
Mabaadi'da Fiisigiska waa koorso sannad socotaa oo adeegsanaysa fahamka fikradeed ee fiisigiska si loo sharxo, loo saadaaliyo, loolana dhaqmo adduunka inagu xeeran.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Mabaadi'da Physics
Cilmi Baaris I
Koorso: # 3048, S1
Koorso: # 3050, S2
Heerarka: .5 (semesterkiiba, koorso sanad-buuxa ah)
Shuruudaha looga baahan yahay: Si guul leh ku dhammaystiray koorso AP ama IB ah oo ku saabsan aagga cilmi-baarista loogu talagalay. Ardaygu waa inuu ku kasbaday 3 ama ka sareeya Imtixaanka AP ama 4 ama ka sareeya imtixaanka IB, oo la xiriira aaggooda loogu talagalay cilmi-baarista. Fiiro gaar ah: Waxaa lagula talinayaa ardayda inay qaataan dhammaan cilmiga aasaasiga ah ee Kimistariga, Bayoolaji iyo Fiisigis muddada afarta sano ah.
Foomka dulsaarka: Fadlan buuxi foomka dulsaarka ee Minnetonka Research ka hor intaadan iska qorin Skyward.
Ardaydu waxay baran doonaan habka, una fuliyaan, cilmi-baarista asalka ah ee asalka ah mowduuc saynis ah oo iyaga daneynaya.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Cilmi-baarista Sayniska I
Cilmi-baarista Sayniska II
Koorso: # 3052, S1
Koorso: # 3054, S2
Shuruudaha looga baahan yahay: Si guul leh u dhammaystiray Cilmi-baarista Sayniska # 3048 iyo # 3050 iyo soo-jeedinta baraha Cilmi-baarista Sayniska.
Koorsadani waxay siineysaa ardayda kaqeyb qaadatay Cilmi-baarista Sayniska fursad ay ku ballaariyaan cilmi-baaristooda, horumariyaan waddooyin cusub iyo faham, kuna dabaqaan barashadooda xaalado cusub oo adag.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Cilmi-baarista Sayniska II
Cilmi-baarista Minnetonka waxay siisaa fursad ay ku dabagalaan cilmi-baaris dhab ah oo ay wadaan su'aalahooda iyo danahooda. Isku xirka ardayda iyo hogaamiyaasha tacliinta iyo warshadaha, barnaamijkaan wuxuu dhiiri galin doonaa oo hagi doonaa ardayda markay horumarinayaan Xirfadaha Qarniga 21aad (wada xiriirka, fikirka xasaasiga ah, hal abuurka, iskaashiga). Ardaydu waxay iskaga tagayaan barnaamijka iyagoo diyaar u ah inay galaan koorsooyin kulleejooyin adag iyo shaqooyin heer sare ah oo ku saabsan dhinacyada baaritaanka.
Booqo Websaydhka Cilmi-baarista ee Minnetonka
Buuxi Foomka Dulsaarka
Ku xiro xiisahaaga sayniska fursadaha xirfadeed ee mustaqbalka adoo qaadanaya koorso VANTAGE: